TSY FISIAN-DRANO ANDOHARANOFOTSY : Nanatanteraka fanangonan-tsonia ny mpanjifa
Noho ny olana momba ny tsy fisian’ ny rano misy fiafarany amin’izao fotoana dia naneho ny hatezerany ireo mponina mipetraka eny Andoharanofotsy, omaly tontolo ka nanatanteraka hetsika ho fanoherana izany. 6 novembre 2018
Mijaly tanteraka izy ireo ary mahatsiaro ho voatohintohina hatramin’ny asa fitadiavana. Voatery nanambatra hery araka izany ny mponina mba hamahana ny olana. Nanao fanangonan-tsonia faobe manambara fitarainana ireo mponina io omaly io, rehefa vita izany dia nihazo ny masoivohon’ny Jirama teny Andafiatsimo mba hitaky ny famahana olana faran’izay haingana. Efa naharitra andro maro, hoy ireto farany ny fijaliana ka mangataka ny fandraisana andraikitra hentitra izy ireo mba hamerenana izany indray amin’ny laoniny.
Tsy misy vahaolana maharitra
Saika ho manerana an’Antananarivo renivohitra amin’izao fotoana izao ny olana goavana mahakasika ny tsy fisian-drano. Maharitra ora maro ny fahatapahana, raha tonga aza ny fiverenany dia mbola ilaharana sy tsy maharaka akory ny filàn’ny mponina no sady mampimenomenona ny rehetra ny fahalotoany. Olana miverimberina ary tsy ahitana vahaolana maharitra eto amintsika hatreto ny famahana izany, hany ka tafiditra ao anatin’ ny fahasahiranan’ny mponina voaray isan-taona ny olan’ny famatsian-drano.
Manampy trotraka ny delestazy
Tsy hita soritra na dia kely aza anefa ny fandraisan’andraikitry ny mpitondra ary lasa zary fahazarana ho azy ireo ny mihaino fotsiny ity tranga iray ity. Faritra maro eto Antananarivo no efa nandefa fampandrenesana eny anivon’ny orinasa Jirama saingy toa zava-poana ihany ary tsy mahazo rariny ny vahoaka. Ny fidangan’ny vidin-drano aloa isam-bolana indray aza no hita mibaribary mampiferinaina nefa dia tsy afa-manohitra akory ny rehetra. Raha ny loharanom-baovao voarainay teo aloha teo izao dia ireo mponina mipetraka amin’ny Faritra Atsimondrano toy ny eny Andramahavola Itaosy no tena ikoizana amin’ny fijaliana rano.
Maharitra herinandro mihitsy aza matetika ny tsy fisian-drano ka na dia miverina mandeha kely aza izany dia ilaharana sy tsy mahazo akory ny sasany dia tapaka indray. Raha ny tatitra voaray teny an-toerana ihany dia mbola tsy misy fanafany izany mandraka ankehitriny.